Hevitra MPANOHARIANA | Janoary 2020 |
2020-01-18 @ 17:59 in Ankapobeny
Tsy tana indray ny eritreritra na dia ninia nangina aza fa toa mafanafana am-boalohany ity taona 2020 ity. Ninia tsy nanoratra tao anatin'izay fotoana lavalava izay na dia be aza ny tian-kampitaina sy hovakian'ny taranaka any aoriana any raha mbola tsy maty ny votoaty anaty lohamilina.
Nandalovana ny fifidianana Ben'ny tanàna izay nanarahana manokana ny tao Antananarivo Renivohitra na dia tsy mpifidy ao intsony aza ny tena. Misy milaza fa vita tanteraka Ravalomanana sy ny antokony rehefa resy amin'ny fifidianana ny olona natolony. Iny ilay hoe aleo ny tantara no hitsara an'izany. Minia tsy miresaka ilay lisi-pifidianana nokitihina isika izany eto na dia voararan'ny lalàna aza izany fikitihana lisi-pifidianana izany raha tsy amin'ny fotoana tondroina manokana.
Tonga ny farany sy ny voalohany taona, nampamirapiratana jiro kely maro dia maro, tahaka ny any andafy ny teo Antaninarenina sy ny manoloana an'Ambohitsorohitra. Dia nirohotra alina tokoa ny olona, naka sary sy fahafinaretana amin'izany zavatra mipendrapendrana mahafinaritra izany. Fanantenana izany mba ho tsara fanombohana ny taona.
Nilazana ny mpiasam-panjakana fa hisondrotra 13% ny karamany, tsy misy resaka ny an'ny tsy miankina an! Avy eo nandrenesana fa hozaraina "panier garni" 65000Ar avy ny mpiasam-panjakana rehetra. Nanomboka ny olana fa samy nanana ny sandany ilay 65000Ar, misy ireo tsy nandray afa-tsy 1800 Ar, nisy ireo tsy nandray afa-tsy 9000 ar... Na hangina tsy hisy tohiny ny raharaha na ho singam-bolo handavo ny vositra io. Lasa ny eritreritra hoe sao dia 13000Ar na 65000frs taloha no saika notenenina dia lasa 65000Ar no voatonona? Aleo ampirimina ho any amin'ny tantara ihany koa iny.
Fa tonga eo amin'ny fandaminana ny tanànan'Antananarivo isika: nandray ny fahefana ny Ben'ny tanànan'Antananarivo, roa andro mialoha izany dia efa napariaka nanerana an'Anosibe sy Anosizato ny mpitandro ny filaminana hanaisotra ireo mpivarotra amoron-dalana, sy hampianatra ny olona amin'ny fiampitana arabe. Raha tena mponin'Antananarivo dia mahay sy mangetaheta hatry ny ela izany fandaminana izany. Tsy nahovoka mihitsy ny mpitondra teo aloha satria tsy nanome baiko ireo mpitandro ny filaminana hampanao izany tahaka ny amin'izao fotoana ny fitondrana foibe.
Dia eo indrindra isika izao: miandry ny tohiny ny olona hoe hovitaina hatramin'ny farany ve ity fandaminana sy fanesorana ny mpivarotra amoron-dalana ity sa fanairana am-boalohany fotsiny dia avy eo miverina tanteraka ny gaboraraka? Fiandrasana ankodimirana avy amin'ny tsy nifidy an-dry zareo io. Tsy adala ny olona misaina ka tsy hitehaka amin'izay fivoarana fa tena faniriana ny hoe tsy ho afo-mololo fotsiny izao fandaminana izao. Ny toerana asiana ireo mpivarotra amoron-dalana? Hanao ny tsy ara-dalàna ve aho izany dia ampidirina ao amin'ny ara-dalàna avy eo?